Maraoka: tsy nampoizina nandravarava · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Marsa 2010 20:32 GMT
Minaret Bab Berdieyinne, Meknes Maraoka (saripikan'i Eli J. T.)
Vaovaom-paharavana nitranga tany Maraoka tamin'ny 19 Febroary lasa teo: Nihotsaka nandritra ny fotoam-bavaka isan-joma ny minaret an'ny môske Bab Berdieyinne (fantatra ihany koa amin'ny hoe moske Lalla Khenata bint Bekkar) izy miorina ao amin'ny tanàna Lovan'ny UNESCO ao Meknès, Maraoka (izay nipetrahako ny 2005-2007). Nolazaina ho 11 ny isan'ny maty tamin'ny voalohany, fa araka ny nampitain'ny CNN tamin'ny sabotsy manaraka io dia 36 izany sady niampy maratra 71. Nolazaina moa fa noho ny orana nisesy no nampalemy ny fanorenan'ilay minaret ka nahatonga ny fihotsahana.
Nifampizara ny fitantarana tao an-toerana sy ny fiaraha-miory tamin'ny mponin'i Meknès ny mpamaham-bolongana. Manoratra i MontanaRon, izay nampianatra teny anglisy tao amin'ity tanàna ity :
Noadinoiko ny naneho fiarah-miory tamin'ireo namana Maraokana noho ity voina nahafatesana olona maro ity tamin'ny nihotsahan'ny Mosken'i Bab Berdieyinne. Mivavaka aho mba tsy haninona avokoa ireo olom-pantatro, Insha’Allah.
Ho an'ireo izay tsy nahare moa moa dia nisy voina nitranga tany Meknes, izay niasako nandritra ny herintaona. Tamin'ny fanisana farany moa dia 41 no nindaosin'ny fahafatesana ary maro ny naratra. Mitodika any amin'ireo izay nharam-boina ny foko. Ato ny rohy ahitana sary nopihako tamin'ny tanàna tranain'i Meknes avy tao wadi, tanàna vaovao izay nipetrahako. Na dia tsy fantatro aza hoe aiza no misy ny Moske Bab Berdieyinne ao amin'ity sary ity, di amatoky aho fa iray amin'ireo voapika ao izany. Ampahafantaro ahy azafady ny misy azy raha misy mahita ao amin'ny sary. Manantitra ny fiaraha-miory sy ny fampiononana amin'ireo izany niharam-boina aho.
Nampitodika ny mpamaky ho amina sary irain'ny moske, tao amin'ny Twitter, ny minisitry ny raharaham-bahiny Bahrainita (sary etsy ambony), sady nivolana hoe:
Tsy misy intsony… ny minaret Bab Berdienne efa niorina an-jato taonany…41 ny maty tao ambanin'ny korotan-birikiny.
Ministry ny raharaham-bahiny Bahrainita
Tsy fitandremana tao an-toerana ve?
Anisan'ireo mpamaham-bolongam-baovao Maraokana maro ny Morocco Post izay mahita ity minaret mirodana ity ho avy amina tsy fitandremana. Avy amin'ny fanaovam-pampitahana tamin'ny raharahan-tsy fitandremana alika nitranga tany Angletera sy ity voina ity no nanipazan'ny mpamaham-bolongana teny:
Ohatra, nomena sazy mihantona enim-bolana sy nodidiana handoa onitra £2 500 noho ny fandikan-dalàna nataony tamin'ny herintaona ny manamboninahitra polisy iray tay Angletera tamin'ny Alatsinainy 22 Febroary 2010 teo. Hita ho tompon'antoka tamin'ny fahafatesana Jay-Jay 18 volana sy Jet fito volana, izay tao aorian'ny fiara nandritra ny hafanam-be tamin'ny volana jona ny taona lasa teo ny Ôfisien'ny polisy Mark Johnson…
…Ampielaro kely ary ny fakanareo antsaina ny zavamisy ka ampifandraiso ireo voina roa ireo: olombelona 41 no maty rehefa nihotsaka teo amboniny ny minaret ary tsy misy ny tompon'andraikitra satria nambara fa ny orana no antony, nefa nisy alika roa matin'ny setroka dia polisy iray no nentina teny amin'ny fitsarana.
Koa izao ny fanontaniako: Iza no alika ary iza no olombelona?
Mizotra ny fiainana
Nanambara ny Morocco Time fa maromaro ny fitondram-panjakana vahiny no nandefa ny fiaraha-miory tamin'ny vahoaka Maraokana.
Ny toerana nijoroan'ny minaret taloha
(Saripikan'i The Moroccan Dispatches)
Ary nizara ny sary nisian'ny voina ny The Moroccan Dispatches, vahiny iray monina any Meknès, ka manazava fa :
Mitohy toy ny mahazatra ny fiainana eo amin'ny manodidina, saingy nitsaha-nitampim-bava sy niady hevitra tamin'ny fihotsahana ny maro tamin'ny Maraokana.